Salaadiin Taageertay Go’aanka Madaxweynaha Somaliland ku Qadacay Shirka Soomaaliya London Loogu Qabanaayo | Togdheer News	Home
Connect on Facebook	8:32 pm | Posted by Admin Salaadiin Taageertay Go’aanka Madaxweynaha Somaliland ku Qadacay Shirka Soomaaliya London Loogu Qabanaayo
Hargeysa (Togdheernws)- Suldaan Daakir Xasan Khaliif iyo Suldaan Maxamed Muuse Nuur (Abu Sufiyaan) oo ka mid ah salaadiinta Somaliland, ayaa taageero buuxda u fidiyey go’aankii Madaxweynuhu ku qadacay ka qaybgalka shirka Soomaaliya bisha May uga qabsoomi doona magaalada London ee dalka Ingiriiska.
Labadan suldaan oo maanta shir-jaraa’id ku qabtay hudheelka Xaraf ee magaalada Hargeysa waxa shacabka Somaliland ugu baaqeen in ay ka waantoobaan waxyaabaha khalkhal ku keenaaya amniga iyo jiritaanka Qaranka Somaliland.
Suldaan Daakir Xasan Khaliif, wuxuu shacabka ugu baaqay in ay madaxdooda adeecaan, isla markaana aanay kula kicin aflagaado iyo waxyaabo been-abuur ah, isagoo xusay inuu taageero buuxda u fidiyey go’aankii madaxweynuhu ku laalay ka qaybgalka shirka Soomaaliya Ingiriiska loogu qabanaayo, waxaannu yidhi; “Waxaannu halkan uga soo jeedinaynaa taageero kal iyo laab ah in aan laga qaybgelin shirka Soomaaliya loo qabanaayo, waxaanannu ku dhiirigelinayna oo ku taageersanahay Madaxweynaheena inuu qadaco wixii mugdi gelinaaya qaranimadeena iyo wanaageena, haddaannu nahay madax-dhaqameedka waannu ugu hambalyeynayna inuu laalo wixii dalkeena khatar ku keenaaya, waannu ku mahadsan yahay inuu laalo qadiyada noocaas ah.”
Suldaan Daakir wuxuu shacabka Gobolka Salal ugu baaqay in ay khilaafkooda si nabadgelyo ah u xaliyaan, isla markaana ilaaliyaan amniga dalka, isagoo arrinta ka hadlayana wuxuu yidhi; “Waxaannu ugu baaqayna walaalahayaga dhibaatadu ka dhex taagan tahay ee ku diriraya saylac in arrinkaas ay nabadgelyo ku xaliyaan, waayo nabadgelyo wax lagu waayey colaad iyo xumaan laguma xallin karo, waana in ay xalka nabadgelyo ku xaliyaan oo gogosha nabadda ku keenaan, arrinkaana madax-dhaqameed ahaan waannu ka shaqaynaynaa.”
Suldaan Maxamed Muuse Nuur (Abu Sufiyaan), ayaa isagu tilmaamay in go’aanka uu madaxweynuhu ku laalay ka qaybgalka shirka Soomaaliya loo qabanaayo sannadkan gudihiisa uu yahay mid sax ah.
“Waxaannu leenahay shacabka Saylac arrintu wax ay ku dhaanto ma laha walaaltino, isu dulqaadk iyo isu tanaasulku iyo in khilaafka lagu dhammeeyo oo aynu nabadgelyadeena iyo islaamnimadeena ilaashano, waana mid waajib inagu ah, waxaanannu leenahay beelahaas Ilaahay khayrka ha idin waafajiyo ee arrinka nabad ku dhammeeya,” ayuu yidhi Maxamed Muuse.
Suldaan Abu Sufiyaan wuxuu shacabka u soo jeediyey in amniga qaranka meel looga soo wada jeediyo, isagoo masuuliyiinta qaranka ku amaanay in ay u tafaxayteen sidii ay caddaaladda u sugu lahaayeen, isla markaana bulshadooda u horumarin lahaayeen.